I-China Coronavirus Anti Epidemic Supplies Uluhlu lweMveliso-CZH / Fmuser Fm Transmitter China Supporter Qhakamshelana: lanyue whatsapp: +86 13602420401 SKYPE: lanyueokera99991
ikhaya » Akohlulwanga » I-China Coronavirus Anti Epidemic Supplies Uluhlu lweMveliso
I-China Coronavirus Anti Epidemic Supplies Uluhlu lweMveliso
Umhla: 2020-03-12 / udidi: Akohlulwanga
iTshayina ICoronavirus Uluhlu lwezinto ezichasene noGawulayo
I-1.Non Woven Anti-uthuli ekhuselekileyo yokuphefumla okuphefumulayo yeMaski kaMachaphaza eNdlebe yokuThintela ukuThobeka kweMlebe
Isini esisebenzayo: ukungathathi hlangothi / indoda kunye nebhinqa
Isitayile semaski: isitayile sendlebe esixhonyiweyo
Iimpawu zemveliso: ukuphefumla, uthuli, iintsholongwane zokucoca
Uhlobo: Abadala, Bantwana
I-2.KN95 Imaski idlulile kuvavanyo lwe-GB-2626-KN95 yovavanyo lwe-PM2.5 lokuTyhila kwesiTayile
Uvavanyo lwe-GB-2626-KN95 oludlulileyo kunye noqinisekiso oluqhelekileyo lukazwelonke.
Iimfuno zebanga le-KN95; ukusebenza ngokufayilwayo kweenkcukacha ezingezizo ioyile akukho ngaphantsi kwe-95%
Uyilo olunemigangatho emihlanu, isigqubuthelo esifanelekileyo xa usiya kwizikhululo zeenqwelomoya ezixineneyo, izitishi zebhasi, iivenkile zokuthenga, iipaki kunye nezitrato ezixineneyo zedolophu, Ukucoca ngokukuko, igesi, ivumba, uthuli, impova, umsi, PM2.5.
Uyilo lwe-3D kunye nokukhanya okulula, ukuhla koxinzelelo lokuqala kwenza ukuphefumla kwakho kube lula.
Iindlebe eziphezulu eziphezulu zelitala ezikhululekile ukunxiba ixesha elide kwaye zikhusele inkqubo yokuphefumla yenye yeempahla zakho zibaluleke kakhulu. Uyilo lokuvula lokungena luqinisekisa ukutywinwa okusebenzayo komoya wangaphandle.
I-3.Automatic Lock ubuso beqondo lokukhanya kunye nee-alm Thermodetector
Zicime ngokuzenzekelayo kubushushu beTo ukuthintela ii alarms zobuxoki
Oku kuza nesoftware ye-WLIR ekumgangatho.WLIR inemodyuli yokujonga ubuso eyakhelwe ngaphakathi, ikhiya ngokuzenzekelayo ubuso kubushushu, ikhusele ngobulumko imithombo yobushushu enqabileyo ngaphandle kobuso kwizigcawu.
I-Algorithm yobukrelekrele yamaThembu ethintela ukungahambisani nobuxoki
I-WLIR ineqondo lobushushu lomzimba elakhelwe ngaphakathi i-Algorithm, eqokelela ngokuzenzekelayo iqondo lobushushu kwiindawo ezahlukeneyo zokuzifundela, kunye nokulungelelanisa isantya sokushisa komzimba ngexesha langempela ngokuziqhelanisa notshintsho lweqondo lobushushu, ukuthintela abantu abaxela ubushushu bomzimba ngokungaqhelekanga ngenxa ye ekuseni okanye ebusuku bubushushu umahluko.
Ubalo oluzenzekelayo lokuHlola kunye neenombolo zokuvusa
I-WLIR inokubala ngokuzenzekelayo inani le-scre evavanyiweyo kunye nenombolo yealarm eshushu yomzimba okrokrelekayo ngexesha lenkqubo yovavanyo, kuthintelo kunye nolawulo lwendyikityha.
IAlarm yoTshisa ngokuZenzekelayo
Xa kufumaniseke umntu wobushushu obumiselweyo, i-WLIR iya kukhupha i-buzzer ngokukhawuleza ukuba ilumkise i-alamu, kwaye imeko yokuqaphela ubuso iya kubonakaliswa ebomvu ngokufanelekileyo ukuze ichonge indawo.
Ngokuzenzekelayo Snap Shot woBushushu obuQhelekileyo boMzimba
Xa i-alarm ishukunyiswa ngumntu ongaqhelekanga ubushushu bomzimba, i-WLIR iyakufaka ngokuzenzekelayo ifoto yomntu ochongiweyo ukuze afumane iinkcukacha kunye nohlalutyo lwamva.
4.ImigcaqukuHla-ngokuzenzekelayo ye-infrared thermal al yomzimba yokulinganisa ubushushu bomzimba ukuze kufunyanwe inkqubo entsha ye-coronavirus
Inkqubo yokuSombulula isiXhobo soLimo lweXabiso loMzimba woLuntu
Ukuthintela yonke imihla
Akukho nto yokuChukumisa
Nguwuphi umgaqo wokulinganisa ubushushu bomzimba bomntu?
Kwindalo, nayiphi na into enobushushu obugqibeleleyo bungaphezulu kwe-zero (-273 ° C) inokubonakalisa ngokwayo iipropathi zayo, amandla obushushu ombane axhomekeke kumbane. Le nto yimitha yokukhanya okanye ye-infrared radiation.
Imisebe ye-infrared lolona hlobo lubanzi lwemitha yokuhambisa umbane ekho kwindalo. Isekwe kuyo nayiphi na into ephantsi kweemeko eziqhelekileyo, iya kuvelisa iimolekyuli zayo kunye neeathom ukuba zihambe ngokungahambi kakuhle, kwaye iya kuqhubekeka ikhanyisa i-infrared eshushu.
Amandla, okukhona kushukuma ngakumbi ukuhamba kwe molekyuli kunye neeathom, kokukhona amandla ephela ekhutshiwe, kwaye ngokuguqukayo, incinci amandla ombane.
Ngokusekwe kumgaqo-siseko we-infrared radiation, kwaveliswa ikhamera yokucamngca eshushu. Iikhamera zokucinga ngomzimba zibandakanya iilensi ezijikelezayo.
Isicoci se-infrared, inkqubo yokulungisa imiqondiso kunye nesigqubuthelo sokuzikhusela, njl. Njl. Njengoko kubonisiwe kumfanekiso.
Umgaqo-nkqubo wokulinganisa ubushushu bekhamera
Imisebe ye-infrared ekhutshwe yinto yovavanyo iqokelelwa yilensi yokukhanya kwaye ifunyenwe ngumcuphi we-infrared.
Umcuphi wangaphandle ufumanisa amandla ombane we-infrared yento emiselweyo. Kukho ubudlelwane obuhambelana phakathi kwamandla ombane kunye nobushushu.
Inkqubo yokulungisa ibonakalisa amandla ombane okanye amaqondo obushushu kwizikali ezahlukeneyo ezingwevu, kwaye izikali ezingwevu ezahlukeneyo zimele ubushushu obahlukeneyo.
Emva koko sebenzisa umntu omnyama (isalathiso sokulinganisa inkqubo ye-infrared) ukwenza ukulinganisa ubushushu ukumisela umgangatho wegrey kunye nomgangatho wobushushu.
Qinisekisa ubudlelwane obuhambelanayo ukufezekisa umsebenzi wokulinganisa ubushushu.
5.Infrared Intelligent yoMzimba oShukumayo wokuKhangela isiXhobo seNkqubo
Isixhobo se-FU-2020B / E isixhobo sokujonga umphezulu womzimba isixhobo esisesona sixhobo sisixhobo sobungcali sokuthintela amaqhekeza ekusasazeni.
Ngaphakathi komgangatho wokulinganisa, inkqubo yenza umlinganiso okhawulezayo kumntu ogqithisa ukungena ngokukhawuleza. Emva kwesoftware inkqubo yokulinganisa umfanekiso oshushu womzimba kunye namaqondo obushushu max, inkqubo iyothusa okanye ilayishe umhla ngqo ngexesha lokwenyani.
Idatha enkulu yePlatform yeNkqubo:
I-Intanethi + Intanethi + imisebenzi
Nge-intanethi yezinto zeteknoloji, ilifu ledatha elikhulu leenkcukacha linxibelelanisa yonke imifanekiso efudumeleyo ye-infrared kwi-intanethi, kwaye iqaphela ikhomishini ekude, ukugcinwa kude, ukubeka iliso kunye nolawulo, iqondo lokushisa elingaqhelekanga usuku olukhulu kunye nokusebenzisa ngobuchule kunye nezinye iinkonzo ezifanelekileyo zelifu.
Iqonga lefu linciphisa umda wokusetyenziswa kwezixhobo kunye nokunikezela ngeendlela ezininzi zokuthintela kunye nokuhlaziywa kobhubhane.
6.UkuKhusela ngokuLungeleleneyo uKhuselo oluKhuselekileyo lweZinxibo zoKhuseleko
1. Umthungo womthungo ugcina ukumelana nolwelo
3. Ibhendi ye-elastic kunye ne-ankle
4. Imitya ebanzi yokuxhathisa okuphezulu kunye nokuthuthuzela ngexesha lokusebenzisa
5. Isinqe se-elastic for fit efanelekileyo
6. Ubungakanani: 180CM
7. Umbala: Mhlophe
I-7.Forehead infrared Thermometer ngokukhawuleza echanekileyo iMilinganiselo ye-LCD yokuNxibelelana
8.Iziyobisi ezibulala intsholongwane